काठमाडौंमा नेहा कक्करको कन्सर्ट आयोजक पक्राउ, यस्तो छ कारण – Nepal Trending
काठमाडौंमा नेहा कक्करको कन्सर्ट आयोजक पक्राउ, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । काठमाडौंमा गत शनिबार भएको बलिउड गायिका नेहा क्ककरको कन्सर्टका आयोजक पक्राउ परेका छन् । नेहा कक्करको कन्सर्ट गरिएको ठमेलस्थित लर्ड अफ ड्रिंग्स क्लबमा हल क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेको उजुरीका आधारमा इभेन्ट आयोजक दीपक घिमिरे पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अतिथि गायिकाको सुरक्षा समेत ख्याल नगरी अत्यधिक टिकट बिक्री गरेपछि घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । टिकट काटेका ठूलो संख्यामा दर्शकहरु कन्सर्ट हेर्न नपाएर फर्किएका थिए । उनीहरुको उजुरीका आधारमा प्रहरीले घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका घिमिरेले कन्सर्ट हेर्न नपाएका दर्शकको पैसा फिर्ता गरिदिने बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पारा माउन्ट इन्टरटेनमेन्टले भारतीय गायिका नेहा कक्कडलाई काठमाडौं ल्याएर शनिबार साँझ ठमेलस्थित एलओडी क्लबमा सांगीतिक कार्यक्रम गरेको थियो। तर, क्षमताभन्दा बढी टिकट काटिएको र क्लबमा खुट्टा राख्ने ठाउँ नभएपछि प्रहरीले करिब ४ सय जनालाई बाहिरै रोकेको थियो।
‘क्षमताभन्दा बढी टिकट काटिएको रहेछ। राती कार्यक्रम हुँदा सबैलाई भित्र जान दिइयो भने भागदौड हुनसक्थ्यो। प्रहरीले बाध्य भएर रोक्नुपर्यो’, एसएसपी सुवेदीले भने, ‘रोक्नेक्रममा उहाँहरुलाई हामीले जसले टिकट काटेर हेर्न नपाएका छन्, आयोजकबाट पैसा फिर्ता गराउँछौं भनेर सम्झाई बुझाई गरेर फिर्ता गरायौं।’
२० फिल्म गरेपछि बल्ल अभिनय सिक्दै ज्याक्लिन
बलिउड फिल्म इन्डष्ट्रीमा यस्ता धेरै कलाकारहरु छन् जो भारतीय होईनन् तर बलिउडमा एकछत्र राज गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफनो अभिनय र क्षमताको कारण नै नेमफेम दुबै कमाएका छन् । तीनै कलाकारहरुको लिस्टमा पर्ने नाम हो ज्याकलिन फर्नाडिज । मिस श्रीलंकन रहि सकेकी यी नायिकाले रितेश देशमुखसंग अलादिन फिल्ममार्फत डेब्यु गरेकी थिईन् । फिल्म सुपरफ्लप भयो तर उनको प्रेम सम्बन्ध निर्देशक साजिद खानसंग रह्यो । उनले आफनो फिल्ममा एउटा आईटम नम्बरमा राखे । उक्त गीत हिट भयो त्यसपछि उनी क्लिक हुदै गईन् ।
सलमान खा , अक्षय कुमार लगायतका नायकहरुसंग काम गर्ने मौका पाएकी ज्याकलिनलाई सलमान खानसंगको मित्रता निकै काम आयो । केही फिल्ममा सलमानले आफनो जोडीको रुपमा उनलाई लिए । बलिउडमा सुरुवाती चरणमा मर्डर २ जस्तो बोल्ड फिल्ममा समेत काम गरिसकेकी उनले बलिउडमा १० बर्ष बिताईसकेकीछिन् । सिनेमा क्षेत्रमा आफनो एउटा ईमेज बनाईसकेपछि बल्ल उनले अभिनय सिक्न लागिरहेकीछिन् ।
उनले यसबारेमा भनिन् “मलाई बलिउडको लागि कुनै पनि किसिमको तालिम लिएको छैन । न मेरो व्याकग्राउण्ड फिल्मी छ । मलाई त निर्देशक र निर्मातामा समेत फरक थाहा थिएन । मैले हरेक किसिमको चुनौतीहरुको सामना गरेको छ । मैले सधै दिएको स्क्रिप्ट रटेर अभिनय गर्थे तर पछिल्लो समय मलाई महसुस भईरहेको छकी सधै यसरी त चल्दैन । त्यसैले २ महिनाको फुर्सदमा अभिनय सिक्दैछु । मैले २० वटा फिल्म गरिसकेको छु तर आज पनि मलाई अभिनय भनेपछि असहजता महसुस हुने गर्छ “। उनले अमेरिकामा अभिनयको क्लास लिने भएकीछिन् ।
फेरि भयो लफडा ! स्टेजमै कुटाकुट हुदाँ डराइन् सनी लियोनी ! भन्छिन् : ” मलाई…
जिग्री र पाडेले खोले भद्रगोलबाट बाहिरिनुको भित्री रहस्य ! मिडिया हबलाई दिए खरो…
नयाँ भद्रगोलमा गालि नै गालि , लाईक भन्दा डिसलाईक धरै , पुरानो टिमले नयाँ सिरियल…
कपिराइट काण्ड : ओ एस आर डिजिटल मार्फत सार्वजनिक “ सानी “ गीत विवादमा ( भिडियो हेर्नुस…